Infuse inosvika vhezheni 4.2 uye inosanganisira inonakidza nhau | IPhone nhau
Icho kune vazhinji chishandiso chakanakisa kutamba mavhidhiyo kubva kuApp Store, Infuse yakagadziridzwa kuita vhezheni 4.2 uye inosanganisira dzimwe nhau dzinonakidza. Asi tisati tataura nezve idzi nhau, nei tichifunga kuti ndiyo yepamusoro vhidhiyo inoridza paApp Store? Ini ndinotenda izvozvo nekuda kwezvikonzero zvitatu: inotamba ese mavhidhiyo, isu tine emafaira emuvhi emafaira uye tinogona kudhawunirodha iwo ma subtitles emamwe mafirimu.
Muchokwadi, kubatwa kwekutanga kwevatatu vanotungamira izvi pambiru ratidza zvimwe maposta ye12 mafirimu izvo zvandisati ndawedzera kune yangu Nguva Capsule. Chinhu chega chatinofanira kuita kuti vaoneke ndechekuti zita revhidhiyo rakafanana neiya remufirimu riri kutaurwa, saka hatizoone iyi poster kana iyo faira remufirimu riine zita rakaita se «zombieland- 1080p- ac3.avi ». Chinhu chimwe chete icho chandakataura kune iyo posita yemamuvhi chakanyatsoshanda kune machipisi ako.
Chii Chitsva muKusimbisa 4.2
Tsvaga kubva kuSpotlight.
Iye zvino inoratidza mushandisi zvibodzwa paTrakt.
Chikamu chekutanga chakarasika chave kusarudzwa zvoga.
Kuenderera mberi kutamba kune zvimwe zvingasarudzwa.
Mavara ezasi ataishandisa munguva pfupi yadarika akaunganidzwa.
Raibhurari yakagadziridzwa kuita Dolby Audio.
Mafaira emuno anogona kubviswa nepo "File Management" yakaremara.
Zvimwe zvigadziriso zvidiki uye kugadzirisa.
Pazvinhu zvitsva zvinosanganisirwa muKufadza 4.2, iyo yandinoona inonakidza kwazvo ndiyo yekutanga, iyo tsvaga kubva kuSpotlight. Dambudziko nderekuti, panguva yekunyora uku, hazvisi kundishandira. Iyi sarudzo inofanirwa kutibvumidza kutsvaga mavhidhiyo akachengetwa muInfuse kubva kuSpotlight, chimwe chezvinhu zvitsva zvakabva muruoko rweIOS 9. Izvi zvinogona kutiponesa isu kupinda muchirongwa uye kutsvaga vhidhiyo iyi nemawoko.
Simbisa ndeye inowanikwa mushanduro mbiri: zvakajairika uye Pro. Kunyangwe zvichiratidzika senge zvakajairwa vhezheni zvinoita zvakafanana nePro, ini ndasimbisa kuti hazviite; iyo yemahara vhezheni haina kutamba akawanda episheni akateedzana andinayo muangu Nguva Capsule panguva iyoyo. Iyo Pro vhezheni inodhura, € 9.99, asi ini ndakaibhadharira yangu Apple TV uye nokutendeseka, handizvidembi uye ndinofunga ndicho chimwe chezvakanakisa kutenga zvandakaita. Kuti ive yakakwana, haina rutsigiro rwemafaira emumhanzi.
Wakamboedza Kusimbisa here? Chii chaunofarira vhidhiyo inoridza?
Simbisa Pro 432,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Inomisikidza yeIOS (uye tvOS) inosvika vhezheni 4.2 uye inosanganisira inonakidza nhau
Ini zvakare ndinogovana pfungwa yekuti zvakakodzera kubhadhara iyo € 9,99 yePro vhezheni.
Chinhu chega, chandisingakwanise kuchisanganisa neimac yangu. Ini handizive kwekutora zita rezita uye password ... (Haisi iyo yekupinda)
Nezuro ndakaiisa pane iyo iPad. Iyo password ndeye iyo yeiyo Nguva Capsule. Handizive kana iwe uchifanirwa kuzviisa pakutanga kubva kuMac's AirPort marongero nekuti kana zvirizvo, ndakazviita kare kare.
Yakakosha… AppleTV + Inomira. Ivo vanokodzera avo 9,99 pasina kupokana. Ndatenda nechiziviso chekuvandudza Pablo.
Manuel Conde Vendrell akadaro
Zvakanaka, mutsauko wakanyanya kubva pane yemahara kuenda kuPRO: mafirimu anoshandisa AC3 codec (iyo inobhadharwa) hainzwikwe musununguko yemahara. Iwo akateedzana haawanzoshandisa iyo codec, asi mafirimu anoita.
Pindura kuna Manuel Conde Vendrell
zvakanaka kwazvo asi ini ndinoda PLEX! Ini ndinofunga iko kuri nani uye kunonakidza kunyorera, ndinofunga inoita zvakafanana asi handina chokwadi kana ichingo tarisa zvinyorwa zvidiki! Ndakabhadhara iyo 10 € uracos uye ini ndinoshandisa yakawanda plex asi ini handisati ndazvidemba, inyaya yekuravira!
Ini ndiri mutsigiri weplex, ini ndaishandisa kupomfera muapuro itsva terevhizheni uye ini ndakaisa zvifukidziro zvandaida uye zvaive zvisingaite kuzvishandura, zvakare chimiro chinonyanya kunakidza icho cheplex pasina kupokana.
Zana muzana muzana newe paKupa, kwandiri ini yakanakisa app yeAppletv uye kubva kuIpad. Zvokuvhara zvinogona kuchinjwa nemetadata chaiyo nekugadzirisa kubva mukati meiyo bhaisikopo pachayo. Zvakare neInfuse ndinotora iwo mafirimu pane iyo iPad ndobva ndavatarisa chero kupi. Kwaziso